Nagu saabsan - 3L Tex Co., Ltd.
3L Tex Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2009, waa soo saare hormuud u ah farsamada / dunta smart & dunta.
Iyada oo tiro badan oo ka mid ah naqshadeynta wax soo saarka patentka iyo hal-abuurnimada farsamada, soosaarka xirfadeed ee sare iyo qalabka tijaabinta ee maroojinta fiber, daboolaya, dahaadhka, dharka dharka tolida tolida iwm waxaan ku takhasusay cilmi baarista, horumarinta, soo saarista, farsamaynta dunta, dharka, dharka laga sameeyay fiber fiber, ahama fiber, FeCrAl, aramid, coper qasacadaysan, fiber galaas IWaxa koox xasiloon oo tayo sare leh oo ka tirsan shaqaalaha wax soo saarka wax soo saarka iyo lafdhabarka tiknoolajiyada wax soo saarka xirfad leh, waxaan hubineynaa in tikniyoolajiyadeena iyo ikhtiraacida wax soo saarku ay si isa soo taraysa u fiican yihiin.
Dharkeena farsamada ayaa si ballaaran loogu codsan karaa dharka difaaca iyo dharka, gaashaanka, heerkulka sare, kululaynta, kuleylka, warshadaha gawaarida, warshadaha dhalada, militariga, caafimaadka, aaladaha, aerospace, iyo fiilada warshadaha iyo fiilooyinka iyo fiilooyinka gaarka ah.
Maamulka shirkadda iyo injineerada had iyo jeer waxay diiradda saaraan nashqadaha wax soo saarka cusub iyo hagaajinta tayada oo si isdaba joog ah isugu daraya baahiyaha macaamiisheenna, sidaa darteedna ay u qaabeyn karaan una horumarin karaan badeecooyin gaar ah iyadoo la raacayo dalabyada gaarka ah ee macaamiisha iyo dalabyada gaarka ah.
3L Tex waxay qaadataa shuruudaha macaamiisha si ay si adag u xakameyso tallaabo kasta oo wax soo saar iyo geeddi-socod kormeer ah, iyo inay siiso alaab iyo adeegyo tayo sare leh mas'uuliyaddeeda u gaarka ah!
dunta farsamada iyo dunta
Dhar dhar dhaqid ah
Xalka sare u adkeysiga
Kuleylka u adkaysta
maro fiber bir ah
cajalado fiber / bir ah
Cajalado Kevlar ah
tubbada / gacmo-gacmeedka
silig tabinta metallized